macruufka 9 - iPhone News | Wararka IPhone
macruufka 9, dhammaan wararka ee nidaamka cusub ee hawlgalka ee Apple iPhone iyo iPad. Laga bilaabo saldhigga lagu aasaasay macruufka 8, macruufka 9 wuxuu u yimaadaa iPhone horumarin ku saabsan waxqabadka iyo xasilloonida, ku guuleysiga ugu fiicnaanta kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysato dareeraha ugu badan ee qalabka iswaafajiya. Dabcan, saami ah astaamo cusub oo aan la sii daynin on iPhone la macruufka 9.
IOS 9 Moodooyinka iPhone Ku habboon
IOS 9 waxay la jaan qaadi doontaa moodooyinka soo socda ee iPhone:
Goorma ayuu macruufka 9 soo baxayaa?
IOS 9 ayaa la soo bandhigay intii lagu jiray WWDC 2015 bisha Juun, waa dhacdo ay isugu yimaadaan kuwa horumariya adduunka oo dhan oo aan ku baranay dhammaan wararka iyo hagaajinta nidaamka cusub ee mobilada ee Apple.
La nooca ugu dambeeya ee iOS 9 Waxaa lagala soo bixi karaa Sebtember 9, 2015, oo ah bisha ay sidoo kale lagu dhawaaqi doono iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus, boosteejooyin ay la imaan doonaan macruufka 9 oo lagu rakibo heer ahaan. Qalabka intiisa kale waa inuu ku cusbooneysiiyaa OTA ama dib u soo celinta iTunes.
IOS 9 casharro
Hadaad leedahay shaki ku saabsan macruufka 9Waa kuwan casharro tallaabo-tallaabo ah oo kaa caawin doona inaad xalliso su'aalahaaga ku saabsan nidaamka cusub ee hawlgalka Apple ee loogu talagalay iPhone:
Sida loo rakibo iOS 9 iPhone-kayga
Sida loo xannibo lambarrada taleefannada
Sida loo isticmaalo AirDrop
Sida sawirro fiican looga qaado macruufka 9
Sida loo dejiyo qalabka digniinta ee iOS 9
Sida loo beddelo wallpaper
Sida loo habeeyo ringtone-ka
Sidee macruufka 9 shaqooyin badan u shaqeeyaa
Sida loo beddelo cabbirka farta ku qoran iPhone-kayga oo leh iOS 9
Sidee ayuu barnaamijka Mail ugu shaqeeyaa iOS 9
Apple ma iloobo: waxay sii deysaa macruufka 9.3.6 iyo 10.3.4 ee gaboobay iPhone iyo iPad
by Luis Padilla samee 2 sano .
Apple ma ilaawdo aaladihi hore iyo qaladaadka suurtagalka ah ee laga dhex arkay, in kastoo ...
Apple waxay xaqiijineysaa in daadashada koodhka iBoot ee iOS 9, uusan saameyn ku yeelanaynin amniga aaladaha
by Ignacio Sala samee 4 sano .
Dhowr maalmood ka hor, iyo dhowr saacadood, koodhka iBoot, maareeyaha ...
Dhibaatooyin ma ku haysaa WiFi-ka iPhone-ka? Isku day xalalkan
by Pablo Aparicio samee 4 sano .
IPhone-kaaga kuma xirmi doono WiFi? Mar kasta oo la soo saaro nooc cusub oo ah nidaamka qalliinka, kuwa cusub ayaa soo muuqda ...
Isbarbardhigga xawaaraha iyo waxqabadka u dhexeeya macruufka 10.1 vs iOS 10.0.2 vs iOS 9.3.5
by Ignacio Sala samee 5 sano .
Mar kasta oo Apple ay soo saarto nooc cusub oo iOS ah, adeegsadayaal badan ayaa isweydiiya inay runti u qalmaan ...
10.1 isbarbardhiga xawaaraha ee iOS 10.0.2 iyo iOS 9.3.5
Dhowr maalmood ka hor, Apple wuxuu sii daayay nooca ugu dambeeya ee iOS 10.1, oo ah nooc ka shaqeeya firfircoonida sawirka, qaabka ...
Apple waxay joojineysaa saxiixa macruufka 9.3.5 iyo 10.0.1, dib ugama noqon kartid macruufka 9
Apple ayaa hadda joojisay inay saxiixdo macruufka 9.3.5, iyadoo aaney jirin wax suurtagal ah oo hoos loogu dhigayo dhammaan kuwa isticmaala kuwaa, ...
Macruufka 10 miyuu ka dheereeyaa macruufka 9.3.5?
Shirkadda Cupertino ee fadhigeedu yahay waxay soo saartay nooca ugu dambeeya ee iOS 10 shalay subax / galab, ...
Korsashada IOS 9 waxay kordheysaa boqolkiiba 88
by Alejandro Cabrera samee 5 sano .
88 boqolkiiba qalabka iPhone, iPad iyo iPod Touch ayaa hadda isticmaalaya iOS 9, koror hal dhibic ah ...
BannerBlackList waxay joojineysaa ogeysiisyada ku jira barnaamijyada aan rabno
Maaddaama Apple ay beddeshay habka ogeysiisyada lagu muujiyo aaladdayada, oo ka socota ...
BottomBar wuxuu u wareejiyaa barta xaaladda hoose shaashadda
Waad ku mahadsantahay isbeddelada laga heli karo Cydia waxaan u habeyn karnaa boosteejooyinkeena sida aan u aragno inay ku habboon yihiin. Waxaan ku dari karnaa mawduucyada isbeddelaya ...
Kudar GIF animated ah shaashaddaada qufulka 'iPhone' ee 'GIFLock'
Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee JAILBREAK na siiso waa awoodda aan u leennahay aaladdayada sida aan rabno, ...
IOS 9 xiriiriyeyaasha soo dejinta